Kudzora mavharuvhu -
KUSVIRA MAHARA - SINGER
DZIDZO YEMAHARA - MUENZANISO 106/206-PR YOKUDZIDZA VHIVHA
Iko kudzvanyirira kuderedza vharuvhu kwakanakira kuchengetedza chaiyo yekumanikidza pasi pevheji. Iyo vheji inopindura kudzvinyirira system kutsika nekubatana pavharovheti kuburitsa uye mutyairi wetsiva unopindura shanduko diki mukudzvinyirira uye unogadzirisa chinzvimbo chevheji nekugadzirisa kudzvinyirira pamusoro peiyo diaphragm.
Inochengetedza kumanikidza kwakaringana pazasi pevheji
Anobata nekukurumidza uye zvinobudirira
DZIDZO YEMAHARA - MUENZANISO 106/206-PR-48 YOKUDZIDZA VHIVHA NEMAHARA KUyerera nepakati-PASI
Iyo inpass kudzvinyirira kuderedza vharuvhu kune inoyerera kudikitira yakananga kuita yekumanikidza kuderedza vharuvhu neiyo yakafanana nepamberi, yakakodzera kune zvishandiso zvine nzvimbo zvinorambidzwa. Pasi pemamiriro ekunze kuyerera, iyo vharuvhu huru inovhara uye nzira dzinoramba dzakavhurika, ichidzora kumanikidza kune zero kuyerera pasina kukonzera chigaro kudedera.
Iyo inochengetedza yakagadzika kuyerera ichidzika kusvika zero
Yakasimba uye yakavimbika kumanikidza kumisikidza
Yakakwana kune yakakwirira nzvimbo yakadzika masheji
4.8 / 5 ( 10 mavhoti )